राष्ट्र बैंकले समात्न थाल्यो पाँच सय र दुई हजारका नयाँ भारु नोट | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
भारतले नोटबन्दीपछि चलनचल्तिमा ल्याएको पाँच सय र दुई हजारका नयाँ नोट समेत नेपालमा भित्र्न थालेको छ ।
‘नेपालमा पाँच सय र दुई हजारका नयाँ नोट चलन चल्तिमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ, तर छिटफुट रुपमा यी नोट नेपाल भित्रिएका छन्,’ वैदेशीक विनिमय बिभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले भने ।
मुद्रा सटही केन्द्र (मनी एक्सचेन्ज) हरुमा अनुगमन गर्दा यस्ता नोट भेटिएको ढुंगानाले बताए । हालसम्म करिब नौ लाख रुपैयाँ बराबरका यी नोट जफत गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
उदेश्य खुलेन !
भारतले पुरानो पाँच सय र एक हजारको भारु नोट प्रतिबिन्धत गर्नुअघिसम्म नेपालमा ती नोट पनि लुकाएर राख्ने चलन थियो । विशेष गरि स्रोत नखुलेको धन राख्ने माध्यमको रुपमा यस्ता नोट बनेका थिए ।
तर भारतले एकाएक ८ नोभेम्बर २०१६ मा मध्यराति पुराना पाँच यस र एक हजारमा भारुमा नोटबन्दिको घोषणा गरेको थियो । त्यससँगै नेपालीसँग भएको ती भारु नोट पनि कागजको खोस्टामा परिणत हुन पुगेका थिए ।
यद्यपी व्यवसायीहरुले भारत पुराएर समेत ती नोट कम दाममा सटही गरे । सो समय व्यवसायीहरुसँग मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ती भारु नोट रहेको बताइएको थियो ।
अहिले पनि स्रोत नखुलेको रकमको रुपमा राख्न नयाँ पाँ सय र दुई हजारका भारु नोट नेपाल भित्रन थालेको आशंका गरिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक भने यसलाई मान्न तयार छैन ।
‘त्यस्तो नहोला । किनभने नोटबन्दीयता भारतीय व्यवसायी नै पनि ठुला दरका ती नोट प्रति आकर्षित हुन छाडेका छन्,’ ढुंगानाको भनाई छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारत जानेको साथमा ती नयाँ नोट नेपाल भित्रने गरेको छ ।
भारतमा एटिएम प्रयोग गर्दा पाँच सय र दुई हजारका नोट मात्र निस्कने भएकोले निकालेको रकम खर्च नहुँदा नेपालीहरुसँग ती नोट नेपाल भित्रिएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।
भारु अभाव हट्दै !
केही समय अघिसम्म भारुको अभाव चर्किरहेको नेपालमा पछिल्लो समय त्यो समस्या हटेको छ । विशेषगरी विहारमा मदिरा निषेधित गरेसँगै भारत सिमाना जोडिएका तराईमा यसको व्यापार बढेसँगै भारुको अभाव पनि कम हुन थालेको छ ।
सरकारले भने चालु आवको फगुनसम्ममा गत आवको तुलनामा तीन अर्ब भारु बढि खरिद गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार फागुनसम्ममा २७ अर्ब २२ करोड भारु खरिद भएको छ ।
सस्तामा चढ्दै आइरहेका मोटरसाइकलको मूल्य पनि ३० हजारसम्म बढ्यो